लोकमार्गमा जोखिमै जोखिम – Nepali online news portal
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ०८:५९ August 10, 2020 पाथिभरा संवाददाता
बागलुङ– मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको घोडाबाँधे–हटिया २० किमी खण्ड कालोपत्र भएको चार वर्ष पुग्यो । नियमित मर्मत तथा सुधार नहुँदा सडक लगभग पूर्ववत् स्थितिमा फर्केको छ । नालीको नामोनिसान छैन । पर्खाल जीर्ण छन् ।
गलकोट नगरपालिका–१ र २ मा गरी चार ठाउँमा लोकमार्ग भासिएको छ । जम्दारे, भुङ्खानी, चौराहा र साइनपाटन सामुदायिक वन क्षेत्रमा उच्च जोखिम छ । जम्दारेको घुम्तीमा सडक भाँसिएपछि ठूला सवारी वारपार गर्न सक्ने स्थिति छैन । साँघुरिएको सडकमा बल्लतल्ल साना सवारी चल्छन् । “गाडी चलाउने जस्तो बाटै छैन, नचलाउँ किस्ता कसरी तिर्ने रु”, जीप चालक राजेन्द्र विकले भने । कालोपत्र भएको अर्को वर्षदेखि नै सडक बिग्रँदै गएको उनको भनाइ छ ।
यस वर्षायाममा सडक झन बिग्रिएको उनले बताए । लगातारको वर्षाले जमिन गलेपछि सडक भाँसिएको वडा नं २ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले सुनाए । “ठाउँठाउँमा पहिरा खस्ने र सडक भाँसिने भएपछि लोकमार्ग जोखिमयुक्त बनेको छ ।” नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका उनले भने।
सडक भाँसिएको ठाउँमा थप क्षति हुनबाट रोक्नबाहेक तत्काल अरु केही गर्न नसकिने लोकमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । “सामान्य पटके मर्मतले हुने अवस्था छैन, पुनः ठेक्का गरेर बृहत् मर्मत सुधार गर्नुपर्छ ।” आयोजनाका इञ्जिनीयर उज्जवल शर्माले भने । आउँदो हिउँदमा काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । घोडाबाँधे–हटिया खण्डको पूरै सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको इञ्जिनीयर शर्माले बताए । “सडक धेरै ठाउँमा बिग्रेको छ, फेरि ठेक्कामार्फत काम गर्नुपर्छ ।” उनले भने, “आयोजनाले विभागमा बजेट माग गरेको छ, छिट्टै काम शुरु हुन्छ ।”
आजको राशिफल ,तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
स्वदेश फर्किए दुबई विमानस्थलमा अलपत्र २६४ नेपाली
भोलीदेखि उपत्यकामा कुन बार कुन पसल खोल्न पाइने ?
पूर्व प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको निधन
कोरोना भाइरसको जोखिममा पनि भाटभटेनी लगायत सुपरमार्केटले ठग्न छोडेन उपभोक्ता